गौचन हत्याकाण्ड: कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ? – ToplineKhabar
गौचन हत्याकाण्ड: कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?
October 27, 2017 प्रदीप भट्ट0Comment
निर्माण व्यवसायी शरदकुमार गौचन हत्याको १८ दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले हत्यारा पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
गत चैतमा गौरीघाटमा गुन्डा नाइके दावा लामामाथिको गोली प्रहारमा पनि यस्तै प्रकृतिको घटना भएको थियो । यस आधारमा पनि प्रहरीले गौचन हत्यामा मनोज पुन समूहको संग्लनता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।, यो खबर आजकोकान्तिपुरमा छ ।
← पहिलो चरणको निर्वाचन: सेनासहित तीन घेराको सुरक्षा
सी जिनपिङ माओपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली नेताः बिबिसीको टिप्पणी →
शवको सनाखत , बेपत्ता व्यक्ती एघार दिनपछी मृत फेला
December 10, 2016 toplinekhabar 0